Thanks to xiiso sii kordhaya ee horumarinta app, maanta, aad iPhone aad u saamaxaaya in ay kaliya ma ahan daawato video clips in aad ku badbaadi ah ee aad taleefan laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad sii qulquli muujinaya TV iyo filimada haddii aad galaangal u leeyihiin xiriir Wi-Fi ama 3G ah. Qaar ka mid ah barnaamijyadooda, kuwaas oo si dhab ah oo bilaash ah iyo kuwa kale waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u qori shirkad gaar ah. Waxaa si kastaba ha ahaatee waa mid aad u muhiim ah in la ogaado in uu yahay video xogta aad u degdeg ah oo keeni karta in eedeeyay da'da weyn ee qorshahaaga.
Part1: 30 Best iPhone Apps si ay u daawadaan TV muujinaysaa iyo Movies on Your iPhone
Part2: Download Video Free la TunesGo Wondershare
Netflix waa shaki la'aan magaca ugu weyn ee filimada iyo TV muujinaysaa barnaamijyadooda sababta oo ah database aad u ballaaran. Inta badan filimada waxaa laga heli karaa 28 maalmood oo kaliya ka dib markii ay lagu sii daayo. The app Netflix free kaliya idin tusiyo filimada iyo bandhigyada ee la heli karo ee Netflix. Times ayaa loo baahan yahay si ay u arkaan.
Price: Qorshuhu wuxuu xad lahayn bilaabantaa $ 7.99 / bishii.
Crackle ku guuleystay kaalinta labaad maadaama ay lacag la'aan ah, filimada la qorin, iyo TV muujinaysaa la geeyo tayo aad u sarayso oo la taageero Airplay. Waxay u baahan tahay xidhid la'aan iyo in kasta oo mararka qaarkood aad leedahay si aad u daawato ganacsi mar mar ah, cidna u caban kartaa sida ay tahay lacag la'aan ah.
App CONtv waxa jira shaci bixiya macaamiisha ay u waayo-aragnimo Con maadda ugu fiican. Waxaa qoreysa taxanaha TV iyo nidaam Classics ahaanna istaahilo ka dhergin doonaa badan.
Price: App waa bilaash laakiin CONtv VIP kharash $4.99
App Tani ayaa noqonaya mid aad iyo aad u badan oo caan ah sida ay bixisaa dadka isticmaala in ka badan hal milyan oo filimada si ay u qanciso oo dhan baahidooda. Waxaa qoreysa adeeg kasta oo wax taageere madadaalada kama dambaysta ah weligood ku riyoon in uu - YouTube, Netflix, Amazon, Hulu, Kartuunka Network iyo si ka badan.
Price: Free laakiin waxay u baahan tahay cable rukun si shirkadaha kale.
Hulu Plus waa tartan ugu weyn ee Netflix iyo ayaa bixiya database ah si siman badan oo filimo iyo TV muujinaysaa ah ee macaamiishu ay tan iyo 2007. Waxa ay leeyihiin qorshayaasha for 'ganacsiga xadidan' iyo 'commercials No'.
Price: Qiimaha adeega $ 7.99 bil kasta.
Waxa la yaab leh, version cusub ee AOL On qandaraaskiisu uu ku egyahay filayo ay. Behind ay user interface fudud, waxa ay bixisaa maktabad adag in ka badan 1.5 million videos, oo ay ku jiraan filimada iyo TV muujinaya in waxa laga heli karaa farahaaga.
App Tani waa weyn sida ay idin tusiyo waxa cusub oo uu leeyahay hawlaha aad u faa'iido badan raadinta. Waxaad shaandhayn karo by rating, horyaalka, sanad iyo sifayn. Waxa kale oo aad bookmark kartaa TV show jecel in ay mar dambe ka daawan. Qaybta download The kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo bixi movie kasta oo la heli karo si aad u offline daawan kartaa.
Playbox kuu ogolaanayaa inaad shaandhayso taariikhda ku daray ama ay caan ah oo filimada ama ay muujinayso TV. Waxa kale oo aad ka daawan kartaa sawir sida The Simpsons iyo Guy Qoyska. Interface app ee aad uula mid tahay Moviebox iyo bixisaa qaababka aad la mid ah sida bookmarking. Waxa kale oo aad sameyn kartaa Mode Kids ka ON si aad u hubiso in ilmahaagu uusan daawashada cajaladaha aan habboonayn.
Video Time Machine waa app arrin aan caadi ahayn in dareen ah in uu kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto 20,000 videos gacanta-qaaday 1860 ilaa 2013 ku geeyo. Haddii aad tahay galay filimada jir ah oo muujinaya TV, tani mid hubaal racfaan ka qaadan doonto in aad.
Tani waxay aad u la yaab laga yaabaa laakiin NBC ayaa app xor ah oo bixiya dhacdooyin buuxa ee muujinaya iyo filimada. Dhibaatadu waxa ay la tahay in tirada ay muujinayso waa mid aad u kooban, inkasta oo aad ku raaxaysan karaan kulan iyo waxyaalo badan oo kale oo si xor ah.
Network CW wuxuu ku siinayaa macaamiishu oo dhererkeedu buuxa filimada iyo bandhigyada TV oo bilaash ah. Waxaad daawan kartaa dhacdooyin ugu danbeeyay ee ay muujinayso sida Diaries Vampire iyo America ee Next Top Model ku hoorto aan login kasta ama password.
Price: App waa lacag la'aan, laakiin waxay u baahan tahay rukun si CW Network
12. saxan meel
Saxan Network waxa uu u dhigmaa shirkadda cable ah iyo mid yahay ilaha waaweyn for news, isboortiga, bandhigyada TV iyo filimada. Saxanka meel app wuxuu kuu ogolaanayaa inaad jadwal lagu qoro 7 maalmood ka hor la isticmaalayo Slingloaded DVR ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa ay bilowdey in ay hesho sumcad xun sababta oo ah naqdida gaabis ah.
Price: app waa lacag laakiin waxaad u baahan tahay inaad macmiilka saxan inay ku raaxaystaan ​​muuqaalada ay a.
13. NBC WIIXDA News
NBC News WIIXDA ku siinayaa sheekooyinka ugu weyn oo kuu ogolaanaya in aad si aad u daawato qeybaha wararka shakhsiga ah, halka gefo waxa dhab ahaan kuu qalmi. Kuwa doonaya in ay qabsadaan wararka iyo sheekooyinka hubaal ah taasi mid ku jeclaan doonaa.
14. Bravo Hadda
Haddii aad gasho xisaabtaada cable, Bravo marnaba dayn doonaa inaad ka maqnaan ah dhacdo qura oo ka mid ah TV show jecel oo dhan oo dhacdooyin cusub lagu daray maalin ka dib markii ay hawada ku TV. App ayaa sidoo kale waxay bixisaa chat, yacni iyo sawiro si aad u hubiso in aad marnaba u caajisin.
Price: App waa lacag la'aan, laakiin waxay u baahan tahay cable Times la Bravo.
WATCH Disney Channel aan kaliya ayaa bixiya filimada iyo bandhigyada TV laakiin dad badan oo la kulan, videos iyo music. Sida aad yaabaa in sarcaadka, app this hubaal wuu dhawri doonaa si caruurta aad mashquul u ah dhowr saacadood maalin walba. Mid ka mid ah ka biyodiiday in kastoo waa in ay qoreysa xayeysiis xisbiga saddexaad, kaas oo isticmaala badan dhibsado heli.
Price: app waa bilaash, laakiin in lagu furo content buuxda, users waxaa looga baahan yahay in ay gasho Xisaabtooda Comcast.
XFINITY TV waa qurbaanka la TV-on-iPhone ka Comcast. Haddii aad isticmaasho Comcast, si fudud u gasho xisaabta iyo waxaad awoodi doontaa inay ku raaxaystaan ​​channels badan sida HBO, TNT ah iyo qaar badan.
Price: App waa lacag la'aan laakiin aad u baahan tahay in ay macaamiisha ah Comcast.
Motion Daily waa video qaybsiga website aad loo jecel yahay. Waxa ay la timaado app ah in ay fud in ay dhex maraan videos ay dadka isticmaala telefoonka mobile ka dhigaa. Sida YouTube, waxaad marin u leedahay videos, filimada iyo bandhigyada TV oo bilaash ah leeyihiin. Haddii aad saxiixdo xisaabta lacag la'aan ah, waxaad u qori kartaa in channels iyo xitaa qiimeyn tayada videos.
Inkastoo app a free, B-Movies waa goldmine run ah filimada, bandhigyada TV iyo dokumantaaryada. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dhirtuba by category ama ay caan. Sidoo kale, daawadayaasha qiimeyn kartaa filim kasta oo app oo kale u nooleeyaa user ku xusan xog kooban oo video ah. Waxaa intaa dheer, waxaa suurtagal ah in bookmark oo dhan jecel videos aad dooratid ka Low, dhexe iyo videos tayo sare leh.
App Tani ayaa si gaar ah loogu talagalay macaamiishu Cinemax sida ay bixisaa geeyo shabakad telefishanka filimada asalka Hollywood iyo gadaashiisa-the-Muuqaallo ku videos. Max Go taageertaa AirPlay iyo si aad u sii qulquli karaan ay ka kooban tahay in aad iPhone.
Price: App waa lacag la'aan, laakiin waxay u baahan tahay Cinemax iyo mobilada cable.
Joost waa mid sarreysa leh tiro balaadhan oo ah filimada dahsoon oo kale videos badan. Videos lagu heli kartaa qaybo, kuwaas oo Action, Oo naxdin baa, Comedy iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa dad badan oo jirka muujinaya TV iyo sawir gacmeedyada haddii aad qaadato waqti aad u qodaan app.
Waxaad ma laga yaabaa in ku fikiray oo arrintan ku saabsan mid ka mid ah, laakiin aad si fudud ku dari kartaa filim ama dhacdooyin of show TV ah in folder DropBox aad, furo app DropBox ah, qaar ka mid ah ku siin waqti ay ku hagaagsan iyo voila, aad daawan kartaa hoorto meel kasta. Ogow in dhammaan videos huleeshay sidan u leeyihiin in ay in ay qaabkan .mov ama .mp4 si ay u ciyaaro aad iPhone.
Price: App waa bilaash ah; In-app iibsadaan: Pro 1 sano waa dhan £ 79,99 iyo Pro 3 bilood waa dhan £ 19,49.
Spectrum isticmaasho iPhone sida TV-ga si aad u daawato ka badan 150 channels live marka aad ku xiran yihiin in aad network Charter Wi-Fi. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa nooc kasta oo video iyo iyaga offline daawado.
Price: App waa lacag la'aan laakiin aad u baahan tahay in ay macaamiisha ka mid ah Axdiga Isgaarsiinta.
Popcornflix takhasusay bixiya kulligiis filimada xor ah oo muujinaya TV. Sababta ka dambeysa ay caan yahay sababta oo ah noocyada badan ee qaybaha, laga bilaabo odayo iyo majaajilada inay riwaayadaha markaasay bishaareystaan ​​farxaan.
Starz bixisaa barnaamij ay in macaamiisheeda iyada oo sahlan si aad u isticmaasho app. Waxay ka daawan kartaa wax on 4 qalabka mar.
Price: App waa lacag la'aan, laakiin waxay u baahan tahay Starz iyo mobilada cable.
App Comedy Central waa run ahaantii mid ka mid ah nooc ka mid ah sida ay u saamaxdo macaamiishu ay si aad u daawato ka dhacday ay jecel yihiin ay muujinayso TV ka dib markii in ka yar maalin in ay sii daayey TV-ga.
Price: App waa lacag la'aan, laakiin waxay u baahan tahay cable Times la Comedy Central.
26. WATCH ABC Qoyska
The app WATCH ABC Qoyska kuu ogolaanaysaa inaad daawato oo dhan oo dhacdooyin cusub ee asalka ah Family ABC u saxiixay in bixiyaha TV aad. Mid ka mid ah feature qabow waa in badbaadiyay meesha aad joojiyay daawashada filim si aad u sii wadi karaan halkaas oo aad iska daayeen.
Price: Free laakiin aad qabto inay la soo wareegto in bixiyaha TV aad.
Helitaanka barnaamijyada T-Mobile ee aad iPhone dhex app this. Dhamaan dadka isticmaala socda macruufka 5 ama ka dib ku raaxaysan karaan Disney Channel, Telemundo, Discovery, ESPN - kaliya la magacaabo wax yar.
Price: app waa bilaash laakiin qiimaha u baakadaha ku kala duwan yihiin $5.99 ilaa $12.99 / bishii.
App Tani waxay bixisaa content aad ugu fiican ee PBS u hoorto lacag la'aan ah. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala badan ayaa sheegay in ay tahay qarow dhab ah in la helo dhererka buuxa filimada. Waxay jiraan laakiin interface ma aha user saaxiibtinimo. Waa maxay waaweyn ayuu iyaga la tahay in ay ku darto saldhigyada deegaanka la videos cusub maalin kasta.
SnagFilms deeq users ay in ka badan 3000 filimada in ay database in laga daawan karaa hoorto lacag la'aan ah helaan. Si kastaba ha ahaatee, inta badan filimada, kuwanu ma aad loo jecel yahay ama baahida loo qabo.
NFB Films ayaa database yar oo ah 2,000 oo filimada xor ah oo muujinaya TV. Xitaa ka xun, inta badan ka kooban yahay filimada Canada, kuwaas oo aad u badan tahay Weligey ma maqlin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah sawir oo muujinaya in caruurta ku raaxaysan doonaa.
r 5.Tips u Lugood
> Resource > Video > Best iPhone Apps: 30 Great Apps si ay u daawadaan TV muujinaysaa iyo Movies on Your iPhone